Miombom-po sy saina amam-panahy ny roa tonta. Tanjona iraisana ny hametraka ny tany tan-dalàna. Tafiditra ao ny fahaleovantenan’ny Fitsarana, ho fanajana ny lalàna ka hisian’ny filaminana, sy hahatomombana ny ady amin’ny kolikoly ary ireo vina anaty Velirano nataon’Atoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Nivoitra ireo androany Alakamisy 18 Novambra 2021 teto Faravohitra, nandritra ny fitsidihana ara-pomba fanajana, nataon-dRtoa Solontena manokana an’ny Filohan’ny Vaomieran’ny Vondrona Afrikanina, SEM Hawa Ahmed YOUSSOUF. Vonona hatrany ny Vondrona Afrikaniona hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Mitondra fanampim-panazavana misesy toy izao, Rtoa Solontena manokana an’ny Filohan’ny Vaomieran’ny Vondrona Afrikanina, SEM Hawa Ahmed YOUSSOUF, sy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.
← Fanatsarana ny sehatry ny Fonja : Nivory ny mpitantana ny tetikasa Fanarenana
Fanafainganana ny asam-pitsarana : « Vitaina ny 15 Desambra ny asa » hoy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana →